ကိုရိုနာမကူးစက် မပြန့်ပွားအောင် လိုက်နာသင့်တဲ့အဓိကအချက် (၆) ချက် - CantWait2Say
ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်း ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့ ကပ်ရောဂါကြီး မကူးစက်အောင် အဓိကလိုက်နာလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ အမြဲတမ်းကြားနေရတဲ့အချက်ဖြစ်သလို social distancing ဟာ ရောဂါကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရေးအတွက် တကယ်လည်း ထိရောက်အရေးပါတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှအိမ်ထဲမှာပဲနေပါ။ အပြင်ကို အရေးပေါ်ကိစ္စတွေက လွဲလို့လုံးဝမထွက်ပါနဲ့။
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာပြီး ၁၄ ရက်စောင့်ကြည့်မှုမခံယူပဲ ဘာမှမဖြစ်သလို သွားလာနေကြတာကို သတိပြုမိမှာပါ။ တကယ်တော့ ကိုယ်က ရောဂါကူးစက်နိုင်ချေရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေက ပြန်လာပြီဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လိမ်ညာမနေပဲ ဆေးရုံမှာဖြစ်စေ အိမ်မှာဖြစ်စေ ၁၄ ရက် quarantine လုပ်ခြင်းနဲ့ ကိုယ့်အသက်ကိုရော ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က သူတွေရဲ့အသက်တွေကိုပါ ဂရုစိုက်ကာကွယ်ပေးရပါမယ်။
3. အစိုးရရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တွေကို စောင့်ကြည့်လိုက်နာပါ
တစ်ခုခုဆိုတာနဲ့ တရားလွန်ကြောက်ရွံ့ပြီး Panic Buying လုပ်တာတွေမပြုလုပ်ပဲ အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာန page တွေက ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ပြန်ကြေငြာတာတွေကို သေချာစောင့်ကြည့်တာ လိုက်နာစရာရှိတာလိုက်နာပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကျန်းမာအောင်နေပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သံသယလူနာဖြစ်နေပြီထင်ရင် ဆေးရုံသွားဖို့မကြောက်ပါနဲ့။ စောစောစီးစီး ဆေးရုံကိုသွားပြနိုင်လေ အသက်ချမ်းသာရာရဖို့ နီးစပ်လေပါပဲ။ ကိုရိုနာကူးစက်ခံရတယ်ဆိုရင်တောင်မှ လူငယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခံအားစနစ်က ရောဂါပိုးကို တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းများတဲ့အတွက် တရားလွန်ကြောက်နေမယ့်အစား ဆေးကုသမှုအမြန်ဆုံးခံယူသင့်ပါတယ်။
5. သတင်းမှားတွေ မဖြန့်ဝေပါနဲ့
ဒီအချိန်ဟာ သူသူငှာငှာကြောက်နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီအကြောက်တရားကို မီးစာထိုးပေးသလိုဖြစ်စေတဲ့ သတင်းအမှားတွေကို မဖြန့်ဝေပါနဲ့။ သတင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရင် အဲဒီသတင်းဟာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်(ဥပမာ- ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် အခြား အစိုးရ page များ) က ထုတ်ပြန်တာ ဟုတ်မဟုတ်သေချာဆန်းစစ်ပြီးမှ ပြန်လည်မျှဝေသင့်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အရေးအကြီးဆုံး ရွှေအချက်လို့ဆိုရမှာပါ။ လက်ကို ဆပ်ပြာမြှုပ်များများထွက်အောင် နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ ပွတ်တိုက်ဆေးကြောတာမျိုး မကြာခဏလုပ်သင့်ပါတယ်။ လက်ခဏခဏဆေးရုံတင်မကပဲ လက်နဲ့တွေ့ထိတဲ့ဖုန်းလို အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း အရက်ပြန်နဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တံခါးလက်ကိုင်တွေ သော့ခလောက်တွေ၊ ဓာတ်လှေကားခလုတ်တွေ၊စတာတွေကိုလည်း တစ်ရှုးနဲ့ အုပ်ပြီးကိုင်တာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ကိုရိုနာကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို အသိသတိနဲ့ ယှဉ်ပြီး အတူလက်တွဲကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကမ်ဘာနဲ့အဝှမျး ကူးစကျပွနျ့ပှားနတေဲ့ ကပျရောဂါကွီး မကူးစကျအောငျ အဓိကလိုကျနာလုပျဆောငျသငျ့တဲ့အခကျြတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဒါကတော့ အမွဲတမျးကွားနရေတဲ့အခကျြဖွဈသလို social distancing ဟာ ရောဂါကူးစကျမှုကိုထိနျးခြုပျရေးအတှကျ တကယျလညျး ထိရောကျအရေးပါတဲ့ အခကျြဖွဈပါတယျ။ တတျနိုငျသမြှအိမျထဲမှာပဲနပေါ။ အပွငျကို အရေးပျေါကိစ်စတှကေ လှဲလို့လုံးဝမထှကျပါနဲ့။
ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ နိုငျငံခွားက ပွနျလာပွီး ၁၄ ရကျစောငျ့ကွညျ့မှုမခံယူပဲ ဘာမှမဖွဈသလို သှားလာနကွေတာကို သတိပွုမိမှာပါ။ တကယျတော့ ကိုယျက ရောဂါကူးစကျနိုငျခရြှေိတဲ့ နိုငျငံတှကေ ပွနျလာပွီဆိုရငျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလိမျညာမနပေဲ ဆေးရုံမှာဖွဈစေ အိမျမှာဖွဈစေ ၁၄ ရကျ quarantine လုပျခွငျးနဲ့ ကိုယျ့အသကျကိုရော ကိုယျ့မိသားစု၊ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြက သူတှရေဲ့အသကျတှကေိုပါ ဂရုစိုကျကာကှယျပေးရပါမယျ။
3. အစိုးရရဲ့တရားဝငျထုတျပွနျကွငွောခကျြတှကေို စောငျ့ကွညျ့လိုကျနာပါ
တဈခုခုဆိုတာနဲ့ တရားလှနျကွောကျရှံ့ပွီး Panic Buying လုပျတာတှမေပွုလုပျပဲ အစိုးရ ဝနျကွီးဌာန page တှကေ ရောဂါနဲ့ ပတျသကျပွီး ထုတျပွနျကွငွောတာတှကေို သခြောစောငျ့ကွညျ့တာ လိုကျနာစရာရှိတာလိုကျနာပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျကနျြးမာအောငျနပေါ။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သံသယလူနာဖွဈနပွေီထငျရငျ ဆေးရုံသှားဖို့မကွောကျပါနဲ့။ စောစောစီးစီး ဆေးရုံကိုသှားပွနိုငျလေ အသကျခမျြးသာရာရဖို့ နီးစပျလပေါပဲ။ ကိုရိုနာကူးစကျခံရတယျဆိုရငျတောငျမှ လူငယျဆိုရငျ ကိုယျခံအားစနဈက ရောဂါပိုးကို တိုကျထုတျနိုငျဖို့အခှငျ့အလမျးမြားတဲ့အတှကျ တရားလှနျကွောကျနမေယျ့အစား ဆေးကုသမှုအမွနျဆုံးခံယူသငျ့ပါတယျ။
5. သတငျးမှားတှေ မဖွနျ့ဝပေါနဲ့
ဒီအခြိနျဟာ သူသူငှာငှာကွောကျနကွေတဲ့အခြိနျဖွဈတာကွောငျ့ အဲဒီအကွောကျတရားကို မီးစာထိုးပေးသလိုဖွဈစတေဲ့ သတငျးအမှားတှကေို မဖွနျ့ဝပေါနဲ့။ သတငျးတဈခုကိုတှရေ့ငျ အဲဒီသတငျးဟာ ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ သတငျးရငျးမွဈ(ဥပမာ- ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန နှငျ့ အခွား အစိုးရ page မြား) က ထုတျပွနျတာ ဟုတျမဟုတျသခြောဆနျးစဈပွီးမှ ပွနျလညျမြှဝသေငျ့ပါတယျ။
ဟုတျပါတယျ။ ဒါကတော့ အရေးအကွီးဆုံး ရှအေခကျြလို့ဆိုရမှာပါ။ လကျကို ဆပျပွာမွှုပျမြားမြားထှကျအောငျ နညျးစနဈမှနျကနျစှာ ပှတျတိုကျဆေးကွောတာမြိုး မကွာခဏလုပျသငျ့ပါတယျ။ လကျခဏခဏဆေးရုံတငျမကပဲ လကျနဲ့တှထေိ့တဲ့ဖုနျးလို အီလကျထရောနဈပစ်စညျးတှကေိုလညျး အရကျပွနျနဲ့ ပှတျတိုကျပေးသငျ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ တံခါးလကျကိုငျတှေ သော့ခလောကျတှေ၊ ဓာတျလှကေားခလုတျတှေ၊စတာတှကေိုလညျး တဈရှုးနဲ့ အုပျပွီးကိုငျတာမြိုးလုပျသငျ့ပါတယျ။
တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ ပြံ့နှံ့နတေဲ့ ကိုရိုနာကပျရောဂါဆိုးကွီးကို အသိသတိနဲ့ ယှဉျပွီး အတူလကျတှဲကြျောဖွတျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။